वनप्लस 3, पहिलो रेन्डरहरू देखा पर्छन् Androidsis
टेक्नोलोजी एकदम द्रुत गतिमा अघि बढ्छ कि त्यहाँ कुनै श doubt्का छैन र स्मार्टफोन बजारमा हामी नयाँ टर्मिनलहरू हेर्ने बानी भएका छौं जुन अरूलाई प्रतिस्थापन गर्दछ, प्रत्येक वर्ष। मोबाइल उद्योग एक उद्योग हो जहाँ त्यहाँ सब भन्दा विकास र सबै समयको सबै भन्दा धेरै उपकरण सुरूवातहरू छन्।
वनप्लस २०१ One को अवधिमा यसको वनप्लस वनको साथ अनावरण गरिएको थियो, यो चिनियाँ निर्माताको पहिलो उपकरण हो। यस २०१ 2014 को अवधिमा कम्पनीले आफ्नो ब्रान्ड नयाँ उपकरणको दोस्रो पुस्ता, साथै मध्य दायरामा मिनी संस्करण सुरू गर्यो, जसलाई वनप्लस एक्स भनिन्छ, जुन ठीक आज आज सुरूवात गरिरहेको छ। सिरेमिकबाट बनेको सीमित संस्करण.
वनप्लस चीनको अग्रणी निर्माताहरू मध्ये एक बन्न चाहन्छ, जस्तै शाओमी, मेइजु वा लेटीभी। यी कम्पनीहरूले एन्ड्रोइड अन्तर्गत आफ्नै हार्डवेयर, साथै आफ्नै सफ्टवेयरको विकास गर्दछ। चिनियाँ निर्माता पहिलो टर्मिनलको प्रक्षेपण पछि धेरै विकसित भएको छ र यसको प्रमाण वनप्लसको मिनी संस्करण हेरिरहेको छ, एक उपकरण जुन वनप्लस २ भन्दा आफै आकर्षक छ।
वनप्लस of को पहिलो रेन्डरहरू
हामीले भनेझैं, टेक्नोलोजी लीप र सीमाहरूबाट अगाडि बढिरहेको छ र वनप्लस टर्मिनलको तेस्रो जेनरेशनको पहिलो विवरण जान्न अझै चाँडो नै छ, हामी भविष्य उपकरणको पहिलो रेन्डरहरू जान्दछौं। यसमा हामी कसरी देख्न सक्छौं कि वनप्लस 3. वनप्लस to को जस्तै छ, पछाडि हामी कम्पनी लोगोको अतिरिक्त डुअल-टोन फ्ल्यासको छेउमा क्यामेरा पाउँछौं। अगाडि, हामी हेर्छौं कि कसरी सेतो / खरानी फ्रेम पूरा टर्मिनलमा गोलो छ।
ठीक यस अगाडिको भागमा हामी तेस्रो जेनेरेसन टर्मिनलसँग दोस्रो जेनेरेसन टर्मिनल बिचको भिन्नता भेट्टायौं र यो स्पिकरहरू हुन्। Lस्पिकरहरू अगाडिबाट पछाडि सारियो। यो मोबाइल फोनको संसारमा नवीनता होइन, तर फ्रन्ट स्पिकरहरू भएको चिनियाँ ब्रान्ड फोन देख्ने यो पहिलो पटक हुनेछ।
यसको हार्डवेयरको सम्बन्धमा, यो निश्चित हुनको लागि यो एकदमै चाँडो छ किनकि यस यन्त्रको बारेमा कतै अफवाहहरू र चुहावटहरू छन्, तर हामी विचार लिन सक्छौं कि भविष्यको वनप्लस Q ले क्वालकॉम द्वारा निर्मित नयाँ प्रोसेसरलाई समाहित गर्न सक्दछ। Snapdragon 820साथै तपाईंको स्क्रिन पनि यसमा राख्न सकिन्छ ''5 ईन्च 1920 x 1080 पिक्सेलको रिजोलुसनको साथ। यो उपकरण लाईट भित्र देख्न पर्छ गर्मी २०१।, त्यसैले हामी लीक र उपकरणको रेन्डरको आगमनमा ध्यान दिनेछौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » OnePlus » वनप्लस 3, पहिलो रेन्डरहरू देखा पर्छन्
अब तपाईं याहूमा तपाईंको जीमेल खाता प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।